Soo deji Spotify Premium APK Bilaash - VidaBytes | LifeBytes
Xisaabinta Aasaasiga ah
Xafiiska firfircoonida 2016
Soo degso Spotify Premium APK bilaash ah
Beddel dariiqa soo dejinta ee barnaamijka SnapTube
Sidee loo hagaajiyaa shaashadda kombiyuutarkaygu aad buu u weyn yahay?
Sida loo nadiifiyo qalabkaaga Xbox One adiga oo aan waxyeello u geysan
Sida loo rakibo Google Translate on toolbar?
Shabakadaha Shabakadda | | Aplicaciones
Kuwa doonaya inay marin u helaan dhammaan liisaska heesaha Spotify laakiin bilaash, Waxaan ka hadli doonnaa siyaabo lagu soo dejisto Spotify Premium APK lacag la’aan. Ma yeelan doontid carqalado waaweyn ama kala duwanaansho, maadaama aad yeelan doontid dhammaan shaqooyinka ay Spotify Premium bixiso.
Mid ka mid ah xalalka ugu horreeya ee la bixiyo ayaa ah in la soo dejiyo Spotify Beta, kani waa APK bixiya nabadgelyo in kasta oo uu gebi ahaanba bilaash yahay. Uma baahnid inaad baajiso qaddar kasta oo loogu talagalay soo saarista heesaha, ilaa aad rabto inaad soo dejiso maadaama aysan lahayn howshaas xorta ah.
Adigoo soo dejinaya Spotify Apk waxaad marin u heli doontaa liisaska heesaha inta badan la ciyaaray oo la wadaago, iyo sidoo kale heesaha hadda jira, oo xitaa adeegsada raadiyaha adigoon bixin qarashka dalabka. Waa tan sida aad u samayn karto:
1 Sida loo helo Spotify Premium lacag la’aan?
2 Soo dejiso Spotify Premium lacag la’aan iyadoo leh beddelka Aqoonsiga mobilada
3 Soo degso Spotify Premium si bilaash ah adoo adeegsanaya Surfing Free Trial
Sida loo helo Spotify Premium lacag la’aan?
Spotify Beta waa nooc bilaash ah oo aad ugu eg Spotify Premium, oo si aad u soo dejiso waa inaad gelisaa xiriiriyeyaashaan si aad gujiso aad isla markiiba u rakibi karto Spotify:
Spotify -kan APK wuxuu xitaa kuu oggolaanayaa inaad yeelato maktabad kuu gaar ah, oo aad ku abaabuli karto heesaha iyo waxa ku jira, iyadoo ku xiran hadba kuwa aad ugu jeceshahay, sidoo kale waxaad abuuri kartaa liisaskaaga gaarka ah.
Waa markeeda nooc ka mid ah Spotify Premium apk oo lacag la’aan ah oo gebi ahaanba la cusboonaysiiyay sidaa darteed waxay noqon doontaa sidii inaad soo dejisay Spotify Premium 2019. Waa inaad sidoo kale xusuusnaataa in APK -yadu aysan qeexin koodka soo -dejinta ee Spotify si aad ugu ciyaari karto heesaha hal adeegsi oo keliya. codsiga.
Soo dejiso Spotify Premium lacag la’aan iyadoo leh beddelka Aqoonsiga mobilada
Haddii ikhtiyaarka hore uusan ahayn doorbidkaaga ama aadan soo dejisan karin, waxaad dooran kartaa inaad beddesho Aqoonsiga gacanta si aad u soo dejiso Spotify Premium lacag la’aan. Marka hore waa inaad soo dejisaa barnaamijka 'Spotify' si aad u abuurto koonto sidii aad u adeegsan lahayd adeegga lacag bixinta ah, ka dib markaa waxay ku siin doontaa, adoo diiwaangelinaya koontada, ku raaxaysiga muddada ugu yar ee isticmaalka bilaashka ah, ama sida ay tilmaamayaan., muddada tijaabada ee arjiga.
Si kastaba ha noqotee, waa inaad ku xisaabtantaa in laga bilaabo waqtigaas dalabku ku keydinayo aqoonsigaaga mobilada xusuustiisa si aad u abuurto koonto cusub isla isla aqoonsigaasna aadan awoodi doonin inaad doorato tijaabada bilaashka ah ee Spotify Premium. Tani waa sababta loogu taliyay in mar kasta oo adeeggaaga bilaashka ahi dhammaado, aad beddesho Aqoonsiga casriga ah.
Si tan loo sameeyo waa inaad noqotaa isticmaale xidid u ah taleefanka Android oo markaa soo dejiso codsi la yiraahdo Beddelka Aqoonsiga Aaladda, waxaad si fudud uga heli kartaa Google Play. Ka dib markii aad soo dejiso barnaamijka, waa inaad gashaa oo gujisaa badhanka tilmaamaya erayga "Random" oo sidan ayaa dalabku kuu dooran doonaa aqoonsi cusub.
Habka xiga ee la dhammaystirayo waa dib -u -bilaabista caadiga ah ee moobilkaaga, fur Spotify Premium mar labaad oo iska diiwaangeli isticmaale cusub, waxaad ogaan doontaa in aqoonsigaaga aan la xusuusan doonin oo uu mar kale ku siin doono tijaabada lacag la'aanta ah. Kani waa geedi socod xoogaa ka daal badan, laakiin weli waa mid hufan.
Soo degso Spotify Premium si bilaash ah adoo adeegsanaya Surfing Free Trial
Ikhtiyaar kale oo miiska saaran si aad u soo degsato Spotify lacag la’aan waa iyada oo loo marayo aaladda Surfing Trial Free. Tani waxay ka timaaddaa dalabka Ha Bixin waxayna kuu oggolaaneysaa inaad ku abuurto magac kale oo leh kaarka deynta gabi ahaanba iyo lacag la'aan.
Markaad ku hesho magacaaga iyo kaarkaaga dalwaddii barnaamijkan, waxaad awoodi doontaa inaad geliso xogtaas Spotify Premium waxaadna yeelan doontaa Spotify lacag la’aan muddo dheer. Waa inaadan ka walwalin inaad dembi gasho, maadaama Surfing Trial Free ay taageerayaan bangiyada caalamiga ah.
Khasaaraha kaliya ee ikhtiyaarkan ayaa ah in daqiiqad kaliya loo heli karo macruufka. Haddii loo baahdo adeegsadayaasha Android, waa inaad ku qaadataa hab kale adoo adeegsanaya “gelitaan hore” laakiin galaya bogga rasmiga ah ee Ha Bixin.
Wadada buuxda ee maqaalka: LifeBytes » Aplicaciones » Soo degso Spotify Premium APK bilaash ah
Noocyada fayrasyada kombiyuutarka ee waxyeellaynaya nidaamka
Waa maxay IMEI iyo sida si fudud loo hubiyo?